Igama elithi "igunya lokuphatha". Izici kokuqhutshwa asimeme ezindabeni civil kanye nomthetho wezobugebengu
zobulelesi eRussia inesimiso ekhethekile - ikhono ubuyekeze iziqondiso, izinqumo enkantolo, nezahlulelo, ezathumba ngalo ibutho zomthetho ngaphansi kwegunya lokuphatha. Ngo kakhulu emazweni angaphandle ungenalo sikhungo zenqubo ezinjalo. Nokho, ngenxa yezimo kwezenhlalo nakwezombangazwe linqoba endaweni isimo sethu, kwakudingekile ukuba lasungulwa.
Ngemva ekusakazeni imithetho Russian futhi imisebenzi iNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu, kwaphakama umbuzo ukuthi kwamukelekile kukhona igunya wokukatelelwa esigabeni kokuqhutshwa uhlaka yayo. enkantolo International waqinisekisa ukuthi ubukhona balo akangeni ukungavumelani izimiso kanye nezinhloso ze-kwamalungelo wobuntu soMthetho-sisekelo. Kodwa ukudlula esigabeni asimeme ayidingekile. Ngisho ngaphandle kwalo, isikhalazo zingafundwa ekukhiqizweni yiNkantolo ngemva kwalesi sinqumo esithathwe yinkantolo amandla.
igunya Supervisory ihlose ukuhlola izixazululo esezansi kwetebulungiswa nekusebenta esikhathini esizayo ukwenza ushintsho oludingekayo, ukulahla kubo uma ukuqulwa kwecala babe semfene sina aholele isinqumo lokwahlulela emthethweni noma okungasekelwe ndawo.
Khumbula ukuthi eziyisisekelo izinkantolo jikelele - esifundeni, ucabangela izimo zombango; izimantshi ekubhekaneni zemibango encane; emaphethelweni, republic lesifunda kanye neNkantolo Ephakeme Yase-Russian Federation Isehlakalo sokuqala Ephakeme ezimbalwa kuphela imikhakha amacala. Ngaphansi komthetho wamanje, igunya lokuphatha e inqubo civil isakhiwo ezimbili isigaba. Futhi ubonelela yezikhalazo Ephakeme KaHulumeni seNkantolo republic Ephakeme, kanye kule emakhotho wesifunda kanye ukubaluleka lesifunda. Kulokhu, ezenziwa kubo, ungabhala isikhalazo okugada, okuyinto wakhonza yeKambiso Division of Russian Armed Forces e zemibango. Basuke ihlukaniswe izikhalazo asimeme ahanjiselwe isinqumo, ukubusa isinqumo, yikuphi okusebenzisa asimeme Ngokwesibonelo enkantolo, nalabo izikhalazo okungase Sizohlola kohlaka KaHulumeni seNkantolo Federation. Ngokuphathelene zobulelesi, kubalulekile ukukhuluma mayelana nezinguquko ezenziwe ngokuvumelana Nekhodi Criminal Procedure wangena force on 01.01.2013 ngonyaka. NgokoMthetho, liye walahlekelwa ukuphoqa inhloko "Sokukhiqiza neziphathimandla asimeme." Okwangempela esikhundleni uba inhloko le "iziNyathelo egcekeni Ngokwesibonelo asimeme." Ngakho, isicelo sokuba kubhekwe kuphela Ephakeme KaHulumeni zeNkantolo Ephakeme. Ngakho manje ezinkantolo endaweni, esifundeni, ibhodi lokwahlulela amacala obugebengu ayikwazi wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza amacala njengoba igunya lokuphatha.
Ngaphansi komthetho omusha, kwesiyingi abantu abangase isinqumo sacala kusebenta, unezela okulandelayo: umshushisi ozimele kanye nabanye abantu amalungelo abo kanye nezithakazelo zithonywa senkantolo, kanye jikelele umshushisi, umshushisi we isihloko Russian Federation kanye umshushisi wenkantolo yezempi, futhi kanjalo namasekela abo.
Ingubo yezandla zeKharkov: umlando, incazelo, incazelo
Dollhouse enganeni khulula
Halogen izibani - ukuthi uzisebenzise ekuphileni kwansuku zonke?